Dubai Kufara | International Tour & Holiday Package
Dubai Mufaro - Dubai Tour Package
| Mutambo Wokushanyira: G-5020
Paunosvika kuDaily International Airport, iwe uchaendeswa kuhotera yako nemumiririri wedu.
Tarisa-ku hotera, zorora uye upedze zororo rose pazuva.
Bvisa kunze kwehotera manheru uye uone nzvimbo dzepamusoro. Kana iwe uchida hukama hweEmirati, enda kune imwe yemasokisi mazhinji eBur Dubai. Uyewo iri pedyo nechepamusoro yeBastakia Quarter iyo inozivikanwa nokuda kwedzimba dzadzo dzakadzorerwa nemasvingo emhepo.
Kudya muIndia restaurant
Usiku huno pahotera.
Mushure mekudya kwekudya kwekudya chamangwanani iwe unotanga rwendo rwehafu yezuva rweguta. Rwendo runokuendesa kuBur Dubai Creek, Spice misika. Iwe unogona kumira kune chiteshi-Stop pamwe neBurj al-Arab, iyo chete yeHotel star hotel. Kubva pano iwe unofamba uchienda kune murume akaitwa Palm Island uye korona yahwo, iyo Atlantis the Palm Hotel. Nzvimbo yakakwirira yefambi yacho ndeyechokwadi isina kuchena white Jumeirah Mosque. Ndapota cherechedza kuti haufaniri kupfeka zvidzitiro, shure uye maoko anofanira kuvharwa uye vakadzi vanofanira kuvhara misoro yavo nekambani yepamusoro. Muurwendo urwu iwe uchashanyira dzimba dzekare dzeArabia nedzimba dzavo dzekuvaka.
Mune manheru iwe uchaenderera kune Dhow cruise pa Dubai Creek. Dhows ndezvamaitiro ezvombo zveArabic zvakaramba zvisingashanduki kwemazana emakore. Nzira iyi inopa maonero akasiyana zvikuru eDhailand. Kune rumwe rutivi ndiDeira, iyo yaiva, nokuda kwezvinangwa zvose, guta rose re Dubai kusvika ku1990. Kune rimwe divi ndiro Dubai yemazuva ano nemigwagwa yakafara uye yakareba-skyscrapers. Kudya (buffet) kuchava mubhokisi.
Iva nezvokudya zvekudya zvokudya zvekudya zvakanaka iwe unogona kuzorora muhotera yako sezvaunenge uchiita mangwanani.
Mumasikati, iwe unotanga Desert Safari yako. Iwe unotakurwa kuenda kurenje. Gara kumashure uye unakidze kuti motokari dzinokwira sei maruva ejecha pasina simba. Dune-bashing, kana iwe uchida! Cherechedza zuva richienda pasi pamusoro pekumusoro kwepamusoro pepamusoro pejecha dune. Zuva reruvara rwezuva rinoitawo kuti zvive zvakakwana kumashure emifananidzo yakawanda yemhuri isingakanganwiki. Kana iyo motokari yemotokari ichiita seyemazuva ano, tora ngamera. Iwe unogonawo kupinda mune imwe nzvimbo yekugadzira henna uye sheesha. A barbecue dinner ichashandiswa pasi pe starter mudenga weArabia apo dhani mudumbu anokuchengetedza iwe neshamwari yake inofamba. Sezvo manheru anoyevedza achiuya kumagumo, iwe unotamirwa kudzokera kuhotera yako
Nhasi, mushure mokudya kwekudya, iwe unosara zuva rose pazororo.
Zvisinei, tinokurudzira kuti utore mukana uyu kushanyira Burj Khalifa, chivako chakareba kwazvo pasi rose. Imbirai kuti inonakidza kana kuti inofunga, hapana kukanganisa kuti Burj Khalifa is ground-break feat zvekugadzira nekugadzira. Imba yakareba kupfuura yepasi yose inokanda denga pa 828m (kanomwe kanomwe yakakwirira yeBig Ben) uye yakazarurirwa musi wa 4 January 2010, makore matanhatu chete pashure pokunge matenga akatanga. Kusvikira vashandi ve13,000 vakashanda masikati neusiku, dzimwe nguva vachiisa goro idzva mumazuva mashoma semazuva matatu. Iko kunonyanya kukosha ndeye Kucherechedza Deck 'Pamusoro' pane 124th floor. Kubva pazvikomo zvakakwirira zvakadai iwe unogona kuona zviri nyore Nyika, iyo mitatu yePalm uye zvimwe zviratidzo. Kuenda ikoko kunotora iwe zvakapfuura zvakasiyana-siyana mafirimu emitambo yepamusoro-soro yepamusoro inokutorera 10m kwechipiri kwemaminetsi ose kusvika pazinga 124 pane yakakura 442m mumhepo. Pakupera kwekushanya, dzokera kuhotera yako
Mushure mekudya kwekudya chamangwanani, chengetedza kubva kuhotera. Iwe uchaendeswa kunhandare yendege kuti uende kwendege yako kumusha.
Dzorerai mari yehupfumi kuIndonesia ndege
4 Nights / 05 mazuva ekugara
Daily Breakfast uye Dinner
UAE visa mhosva dzaisanganisira
Ok kuvhara mhosva
Dzokera kune imwe nzvimbo yekutengesa kuIndaneti (chigaro muCoach)